Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 18.1 "Serena" | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 18.1 "Serena"
Luigys toro | | Kugoverwa, GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Sezvakangoita neshanduro yapfuura yeLinux Mint, nhasi ndaenderera nekuisa yakachena kuisa ye Linux Mint 18.1 "Serena" ine Cinnamon Desktop Nzvimbo, Ndakashamisika kuti ndoita here kana kwete gwara Zvekuita mushure mekuisa Linux Mint 18.1 "Serena", nekuti zvingaite senge trite. Ini ndakakurudzirwa kuzviita, kugadzirisa uye kugadzirisa mamwe matanho.
Mune ino vhezheni vhezheni isu tichakwanisa kuita iyo yese kunyorera uye theme yekuisa nyaya kubva pane script, asi nenzira imwecheteyo, ini ndichasiya maitiro ekuzviita zvakasiyana, nekuti vazhinji vaifarira kushandisa madingindira uye ma icon mune avo akasiyana distros.
Iyo inotungamirwa yakavakirwa pane yangu mutungamiriri ku Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 18 "Sarah", pamusoro peye mutungamiri ngatishandise linux and the Yekupedzisira Linux Mint 18 de Erik dubois (kubva kwandakatora zvinyorwa zvinoverengeka ndikazvigadzirisa zvandinofarira).
Mushure mekupedza gwara, desktop yako inogona kunge iri nenzira iyi, pamusoro pekugadziridzwa, kugadzikana uye iine huwandu hwakanaka hwesoftware yakakosha, zvese izvi nekukurumidza uye zvakachengeteka.
1 Chii chitsva muLinux Mint 18.1 "Serena"?
2 Zvimwe zvekufunga nezve kufunga usati watanga gwara
3 Matanho ekuita mushure mekuisa Linux Mint 18.1 "Serena"
3.1 Mhanya iyo Yekuvandudza Maneja
3.2 Isa madhiraivha eimba (vhidhiyo kadhi, waya, nezvimwewo
3.3 Isa rongedza mutauro
3.4 Isa bhatiri maneja
3.5 Isa git
3.6 Isa zvirongwa zvakakosha otomatiki
3.7 Gadzirisa chitarisiko
3.7.1 Script yekuisa akanakisa madingindira eLinux Mint 18.1
3.7.2 Script yekuisa akanakisa ma icon eLinux Mint 18.1
3.7.3 Kusarudza Musoro neMifananidzo
3.7.4 Script yekuisa yakanakisa conky kumisikidza yeLinux Mint 18.1
3.8 Isa zvinodzivirira mafonti
3.9 Isa software yekutamba
3.10 Isa odhiyo plugins uye yakaenzana
3.11 Isa mamwe mapurogiramu
3.12 Verenga zvinyorwa zvepamutemo
3.13 Wongorora yedu nyowani system
Chii chitsva muLinux Mint 18.1 "Serena"?
Linux Mint 18.1 "Serena" ndiyo yekupedzisira yemhuri yeLinux Mint 18, inouya yakashongedzerwa neCinnamon 3.2, MDM 2.0, iyo Linux kernel 4.4 uye inoshandisa Ubuntu 16.04 sepaseji yepasi. Saizvozvowo, Linux Mint 18.1 iri zvakare LTS, saka ichawana zvigadziriso zvekuchengetedza kusvika muna 2021.
Nenzira imwecheteyo, hunhu hwakakosha ndehwunotevera:
Iyo default software yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni shanduro uye nyowani maficha akawedzerwa.
Screensaver yakagadzirwazve uye kunyorwazve kubva pakutanga muPython. Haitaridzike zviri nani chete, zvakare inokurumidza, inoteerera, uye inogadziriswa kupfuura yekare.
Hardware inotsigira kuvandudza.
Kubatanidzwa kwematanho akatwasuka.
Iyo applet ine ruzha ikozvino inogona kubata akawanda anopinza.
Iko kuita kweyekutanga menyu kwakagadziridzwa uye kwakagadziridzwa kuitira kuti ikwanise kufambiswa zvizere kubva kubhobhoyo.
Iyo yekuvandudza maneja ikozvino inotipa mukana wekuziva mabviro epakeji.
Mutauro manejimendi kugadzirisa.
Zvimwe zvekufunga nezve kufunga usati watanga gwara
Linux Mint 18.1 inouya nenzvimbo dzinoverengeka dzedesktop, mazhinji ematanho anoitwa mune ino gwara (kana asiri ese) anoenderana neimwe yedesktops.
Matanho ekuita mushure mekuisa Linux Mint 18.1 "Serena"
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti imwe neimwe yeaya matanho akaedzwa uye mhedzisiro yawo yakagadziriswa, nenzira imwecheteyo, iyi idanho rangu nhanho, saka zvimwe zvimwe zvinhu zvausingafanire kuita maererano nezvaunoda, gwaro rino richakuchengetera nguva yakawanda uye pamusoro pezvose zvichakubatsira iwe kuti distro yako igadzikane uye yakanaka.
Mhanya iyo Yekuvandudza Maneja
Iyo Mint timu inoratidzira zvigadziriso mumatanho mashanu ekuchengetedza / njodzi, uye kumisikidzwa kwenhanho yechina ne4 kubva kuUbuntu haina kukurudzirwa kune vashandisi vevashandi, nekuti zvinofungidzirwa kana kuzivikanwa kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kana kuuraya sisitimu. Zvatinoita nekutanga iwo murairo Sudo apt-tora kukwidziridzwa nechiteshi inonyatso kuisa ZVESE zvidzoreso, zvese zvinobatsira uye zvinokuvadza zveMint, izvo zvinogona kukonzeresa mamwe matambudziko
Isa madhiraivha eimba (vhidhiyo kadhi, waya, nezvimwewo
MuZvinyorwa Zvekufarira> Zvimwe Zvidhiraivha isu tinokwanisa kugadzirisa nekuchinja (kana tichida) mutyairi wekambani yemifananidzo kadhi kana chimwe chishandiso chiri kukonzera matambudziko.
Isa rongedza mutauro
Isa bhatiri maneja
Kana iwe ukaisa Linux Mint 18.1 palaptop yako, ini ndinokurudzira kuti iwe ugadzire maneja webhatiri iyo inokutendera iwe kudzora kuchaja uye kuburitsa bhatiri rako kwavari, isu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Iyo yekumisikidza kurongeka kweichi chishandiso inovimbisa yakakodzera bhatiri rako, saka ingo isa iyo uye ndizvozvo
Pasina kupokana, iri idanho rinosungirwa, kuisa git muLinux Mint 18, isu tinofanirwa kunyora unotevera kuraira:
sudo apt-tora kuisa git-zvese
Isa zvirongwa zvakakosha otomatiki
Erik dubois yagadzira hombe kuvandudza kune yayo script yekumisikidza yekumisikidza maapplication, madingindira uye maacon, saka isu tichaenda kuushandisa kutsiva iyo yatakange taita mushanduro yeLinux Mint 18. CNayo unogona kuisa zvinotevera zvinoshandiswa uye nevamwe vamwe:
Kuti uite iyi kumisikidza iwe unofanirwa kuita inotevera mirairo:
git clone https://github.com/erikdubois/Ultimate-Linux-Mint-18-Cinnamon.git cd Pakupedzisira-Linux-Mint-18-Cinnamon / ./quick-install-v2.sh
Ichatanga nzira yakareba iyo ichagadzirisa yako distro, kuisa zvese zvinogadziriswa, kuchenesa OS, kuisa akawanda anodiwa mafomu, kuisa madingindira uye ma icon. Muchidimbu, nekumhanyisa iyi script, yako Linux Mint 18.1 "Serena" ichave yakagadzirira kunakirwa sezvainofanirwa.
Kune nzira dzakawanda dzekugadzirisa yako Linux Mint 18.1, mazhinji acho akasununguka, ini kunyanya handina nguva yakawanda yekuisa zvinhu chimwe nechimwe, enda kunoyedza zvichingodaro, saka ndinotora mukana wezvinyorwa zvitatu zvinotibvumidza isu kuisa akasiyana madingindira, maekisheni uye marongero econky.
Kuti uwane iyo script kurodha pasi uye nekuisa akanakisa madingindira uye ma icon, isu tinofanirwa kukomberedza repository ine zvese zviri zviviri, kuwedzera kune zvinyorwa kuti tiise iwo wega dingindira zvakasiyana. Kune izvi isu tinofanirwa kuita unotevera kuraira:
git dombo https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git
Script yekuisa akanakisa madingindira eLinux Mint 18.1
Kumhanya iyo script all-in-once-installation_deb_themes.sh, inowanikwa munzvimbo yekuchengetera themes-icon-pack.git iyo yatakaumba, isu tinofanirwa kubva kudhairekitori rakanyorwa, ita zvinotevera script nenzira iyi:
Iyi script ichaisa otomatiki zvinotevera madingindira eLinux Mint 18.1
Ambiance theme uye Radiance mavara
Arch Frost GTK Rima
Ceti 2 Musoro
Numix Mazuva ese theme
Vertex theme (yakasviba uye yakajeka)
Script yekuisa akanakisa ma icon eLinux Mint 18.1
Sezvatakaita nemadingindira, kuisa mifananidzo isu tinofanirwa kuzviwana isu mune dhairekitori re themes-icon-pack.git uye unomhanya unotevera script seizvi:
Iyi script ichaisa otomatiki zvinotevera mifananidzo yeLinux Mint 18.1
Numix denderedzwa mifananidzo
Superflat remix mifananidzo
Ultra yakadzika mapikicha
Papirus Rima Gtk
Kusarudza Musoro neMifananidzo
Paunenge iwe waisa iyo icon uye theme pack, isu tinopfuurira kusarudza yakakodzera kwazvo, kuti tiite izvi kubva kumenu yatinowana «Misoro», isu tinosarudza mubatanidzwa weWindow Border, Icons, Kudzora, Mouse Pointer uye Desktop.
Kana iwe uchida kuti desktop yako ive senge yangu, unofanirwa kusarudza inotevera gadziriso:
linux mint misoro 18.1
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kana iwe uchida kusunungura iyo maikoni uye madingindira mune ramangwana, iwe unogona kuzviita nekuita inotevera inotevera script inowanikwa mune yakaunganidzwa dura.
Script yekuisa yakanakisa conky kumisikidza yeLinux Mint 18.1
Conky, ndeye system yekutarisa iyo inoratidza ruzivo pane akasiyana zvikamu, senge RAM ndangariro, CPU kushandiswa, system nguva, nezvimwe Kubatsira kukuru ndekwekuti kune akawanda "makanda" echishandiso ichi.
Mune ino kesi ini ndinoshandisa Aura muunganidzwa weakanakisa conky maratidziro, atinozowana nekunamatira iro repamutemo repositi:
Vhura iyo folda uye unomhanya unotevera script
Iyi script ichatora nhevedzano yekugadziriswa kubva github uye gadzira iyo .aura dhairekitori (rakavanzika dhairekitori). Iko gare gare kumisikidzwa kwese kwekunyongana kunogona kusarudzwa, tinoenda kune yakasikwa dhairekitori
Kamwe mune ino dhairekitori isu tinoita:
iyo ichagadzirisa conky kune yazvino vhezheni. Kana tikasvikira dhairekitori re. ./install-conky.sh izvo zvichaita zvese zvinodiwa marongero otomatiki.
Iko kurongeka kweconky kunowanikwa mu halo zvinotevera:
Kuti Conky amhanye apo Linux Mint 18.1 Serena inotanga, isu tinofanirwa kutevedzera inotevera maitiro:
Kubva kuLinux Mint menyu enda ku aplicaciones al inicio, wobva wawedzera uye gadzira imwe iine zita conky uye murairo conky
Isa zvinodzivirira mafonti
Isa software yekutamba
Kwandiri izvi hazvisi zvakakosha, asi kune avo vanofarira mitambo, pamusoro peraibhurari hombe yemitambo ine mareti, isu tinawo http://www.playdeb.net/welcome/, rimwe peji iro rinonyanya kuunganidza mitambo yeLinux masisitimu mune .deb mapakeji. Kana isu tichidawo kunakidzwa nemitambo yedu yeWindows, kwete kuora moyo, sezvo tiine dzimwe nzira:
Kune ese aya mapurogiramu, tinogona kubvunza mune avo epamutemo mapeji epamutemo, iyo Linux Mint Zvirongwa maneja kana iyo terminal. Saizvozvo, isu tinokurudzira zvikuru kuverenga izvi mini-mudzidzisi iyo inotsanangura maitiro ekuisa uye kugadzirisa yega yega.
Steam yeLinux (http://store.steampowered.com/search/?os=linux)
Kwenguva yakati ikozvino, iyo Steam yemitambo chikuva inogona kushandiswa natively. Izvi zvinoreva kuti kune huwandu huri kukura hwemitambo inowanikwa pane Steam iyo natively yakagadzirirwa kumhanya paLinux.
Kuisa Steam, ingo tora iyo .deb faira kubva ku Steam peji.
Ipapo ivo vanoshandisa unotevera kuraira:
Zvichida zvimwe zvikanganiso zvekutsamira. Kana zvirizvo, ingoisa unotevera kuraira kuti uvagadzirise:
Zvino kana iwe ukavhura Steam, ichagadzirisa. Pano Iwe unowana rondedzero yakakwana yeLinux mitambo inowanikwa pane Steam.
Isa odhiyo plugins uye yakaenzana
Dzimwe dzadzo, saGstreamer kana Kutya, zvichatibatsira kuwedzera katarogu yedu yemafomati akatsigirwa; ese ari maviri anowanikwa mune Zvirongwa maneja kana anogona kuiswa uchishandisa rairo sudo apt-tora kuisa. Inokurudzirwa zvakare kuisa pulseaudio-equalizer, inokwanisa kupa yepamberi Pulse Audio kumisikidza uye kugadzirisa ruzha mhando. Kuisa iyo isu tinoshandisa mirairo mitatu:
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: nilarimogard / webupd8 sudo apt-tora sudo apt-tora kuisa pulseaudio-yakaenzana
Isa mamwe mapurogiramu
1. MuPurogiramu Manager, iyo yatinopinda kubva kuMenu> Dhairekitori, isu tine yakawanda kwazvo nhamba yezvirongwa zvechero basa rinoitika kwatiri. Maneja akarongedzwa nezvikamu, izvo zvinofambisa kutsvaga izvo zvatinoda. Kana chirongwa chatinoda chavepo, ingori nyaya yekumanikidza bhatani rekuisa uye uchinyora Administrator password. Isu tinogona kunyange kugadzira yekuisa mutsara iyo iyo imwechete maneja ichaita zvakateedzana.
2. Neye Package Manager isu tinoziva chaizvo mapakeji atinoda kuisa. Hazvikurudzirwi kuisa zvirongwa kubva pakutanga kana tisingazive ese mapakeji atichada.
3. Kuburikidza neyemagetsi (Menyu> Zvishongedzo) uye typing kazhinji Sudo apt-tora kuisa + chirongwa chirongwa zita. Dzimwe nguva isu tinofanirwa kumbobvira tawedzera iro repository nemirairo Sudo apt-tora ppa: + repository zita; kutsvaga chirongwa neconsole tinogona kunyora zvakakodzera kutsvaga.
5. Kubva kune yepamutemo peji reiyo purojekiti kana iwe uine mamwe matanho ekumisikidza.
Mcomix: komiki kuverenga
Verenga zvinyorwa zvepamutemo
La YeMutemo Mushandisi Nongedzo Linux Mint haingoshandurirwe muchiSpanish chete asi inokurudzirwa zvakanyanya yekumisikidza uye kushandiswa kwemazuva ese kweiyo system.
Zvinokurudzirwawo kuti system yako igadziridzwe, tanga kunakirwa neyaunofarira kugovera, ugovanawo nenyika izvo zvawakadzidza.
Chekupedzisira, isu takamirira makomendi ako pagwaro. Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 18.1 "Serena"
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 18.1 "Serena"
Luis M akadaro
🙁 Ndine kadhi ye nvidia 960m, mushure mekuisa mutyairi wemugadziri wesinamoni mushure mekutanga zvekare inondiudza "sinamoni yakangodonha iwe urikumhanya muFallback Mode"
Pindura kuna Luis M
Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika kwandiri uye mhinduro yakandishandira yaive yekuvhara chikamu uye kutanga chikamu zvakare, kugadzirisa dambudziko risina kudzokororwa.
Bvisa Zvinyorwa zve Linux Mint 18.1 Cinnamon
PaNVIDIA Optimus malaptop Mutyairi Mutyairi anokurudzira kuiswa kwevatyairi veNVIDIA.
Aya madhiraivha anowedzera rutsigiro rweNVIDIA Prime, iyo inokupa iwe kugona kuchinja pakati peNVIDIA neIntel chipset.
Mushure mekuisa madhiraivha aya, unofanirwa kudzoreredza komputa kuti vatakure.
Paunotangazve, nyaya iri kudzivirira NVIDIA prime kubva kushanda nemazvo uye izvi zvinoita kuti Cinnamon iparare.
Ingo pinda kunze uye upinde mukati kuti ugadzirise iyi nyaya
Ini ndatoita izvozvo uye zvichiri zvimwe chete.
Iwe unogona ndapota edza zvinoratidzirwa nedamart uye utiudze zvakare kuti uri kuita sei.
Munguva pfupi yapfuura ndakakurudzirwa kuyedza kushandiswa kweLinux, kunyanya Linux Mint 18 Cinnamon uye zvinoita senge kwandiri zvine hungwaru uye zviri nyore kugovera, ini ndakangoisa nekaviri bhutsu nekuti kutaura chokwadi ndichiri kutya kusiya Windows yenguva dzese ini ndanga ndichiishandisa. [asi nhasi ndinoshandisa Mint ne80%]
Pamusoro peRibre Hofisi inouya nekumisikidza, Wps Hofisi inonakidza kwazvo kunyangwe kuenderana kwayo nezvakawedzerwa isiri open source. Docx,. Xlsx uye. Pptx iyo kusvika parinhasi haisi 100% inoenderana neLibre Office.
Nekuti izvozvi ndiri kuona kuti Linux yakagadzikana, yakachengeteka uye inokurumidza, chinhu chikuru. Ini ndakaiisa pane makumi matanhatu nematanhatu muchina uye semahara software newbie ini ndicharamba ndichiishandisa.
Ndiri kufara kwazvo kuti iwe unozvipa iwe mukana wekushandisa Linux, Linux Mint 18 is a great distro, solid solid and intuitive for new users. Ini ndinokurudzira zvikuru gwara rekutanga kune Linux https://blog.desdelinux.net/guia-para-principiantes-en-linux/ izvo zvinokutendera iwe kuti uve nekutarisisa kukuru pane inoshanda system.
Isu tinovimba kuti vanhu vazhinji vakaita sewe vanozove nemukana wekuyedza iyo inoshanda sisitimu iyo inokutendera iwe kuti uve wakasununguka uye muridzi wega wega wega weanoshanda ayo ainayo.
Berta Trias akadaro
Ini ndakaisa iyi yekuvandudza (Erik Dubois) uye ndinofungidzira kuti ndinosuwa rimwe danho rakakosha ndisati ndaenderera mberi kuti nditangezve sisitimu kuti ienderere mberi neyakagadziriswa yakarongedzwa naLuigys Toro, iyo yandinoona ichifadza kwazvo.
Izvo zvaitika ndezvekuti reboot haina kuziva password yangu uye ini handikwanise kuwana iyo system.
Pane mumwe munhu angandibatsira ndapota. Ndanga ndichishandisa Mint chete kwenguva yakati, asi ini ndichiri mutsva kune aya ma distros.
Pindura Berta Trias
Press Press + alt + f2 iwe unowana terminal. Ndokumbirawo edza kupinda kubva ipapo uye wotanga iyo graphical nharaunda ne startx -. Tiudze kuti zvinofamba sei.
Iwo dzidziso yakanaka kwazvo senguva dzose.
Ndinovimba unonakirwa nazvo uye zvinokubatsira zvikuru.
Camila torres akadaro
Mhoroi, iyo dzidziso yakanaka kwazvo, asi ini ndanga ndine mamwe matambudziko
mune terminal ndakakwanisa kuisa unotevera rairo
uyezve kana uchiisa ./all-in-once-installation_deb_themes.sh uye nemirairo inotevera kubva zvino (ma icon, nezvimwewo) zvinondiudza kuti dhairekitori harimo, ndapota unogona kuona kuti zvese zvakachengetwa zvakanaka ne mafaera kana mumwe munhu anotsanangura zvandingaite pakuonekwa, kukwazisa uye nekutenda zvakanyanya !!!
Pindura kuna Camila Torres
Iwe unofanirwa kutanga watopinda mumusoro-icon-pack-dhairekitori… Kubva pane yemhando yekupedzisira zvinotevera: cd theme-icons-pack /
Mhoroi, kubva pamudzi wako dhairekitori iwe unofanirwa kupa rairo «cd theme-icons-pack» ipapo iwe ita murairo
Zvaibatsira kwazvo, maita hama !!
Pindura kune ghezer
Huge post, basa rakanaka!
Ndinozvinyora pasi kuitira bvunzo dzemangwana,
Ndinovimba kuti ramangwana bvunzo dzemhedzisiro inogutsa.
Ndatenda zvikuru nekupindura.
Ichi chinyorwa ndicho chandiri kudaidza chakanakisa posvo nezve Desktops. Kunyangwe kusvikira nhasi ndisina kushandisa LinuxMint uye pamwe ndakaisa Cinnamon paJessie, ivo vanopa chishuwo chekukwira Mr. Mint, iyo yakanyanya kushandiswa kugovera nhasi maererano ne distrowatch.com ... ichiteverwa naDebian. 😉
Kana zvisiri zvekunetsekana chaiko ndinofanira kubata zvinyorwa uye kuwana Internet ...
Kwaziso nekubudirira, Wadiwa Luigys!
Gerardo Ramíres akadaro
Ndatenda zvikuru negwara iri, raive rakanakira kwandiri ... rairo raive rakanyatso ...
Ndatenda - Rombo rakanaka uye kubudirira kwakawanda
Pindura Gerardo Ramíres
Mhoroi, ndeipi doko iwe yaunoshandisa mukutora?
Orlando nuñez akadaro
Pane mumwe wenyu akakwanisa kuisa apache, php, mysql-server uye phpmyadmin mune iyi vhezheni? Ini handikwanise mushanduro 18 uye kana mune iyi 18.1
Pindura kuna Orlando Nuñez
Mhoroi, maita basa nedzidziso, yakanyatso kukwana, chinhu chimwe chete, kana uchiisa madingindira na
Faira kana dhairekitori haripo
Pakupedzisira misoro yaunotaura haina kuiswa.
Adan garcia akadaro
Mushure mekurodha pasi, unofanirwa kuzvimisikidza mufaira «madingindira -mifananidzo-kurongedza» nemirairo «cd madimikira -mifananidzo-kurongedza /» wobva wanyora «./all-in-once-installation_deb_themes.sh»
Pindura Adan Garcia
Mhoro. usati waita iwo murairo unofanira kuchinja dhairekitori. Kubva kufolda yekumba iwe unofanirwa kunyora unotevera kuraira: "cd theme-icons-pack"
Wobva wamhanya kuraira "./all-in-once-installation_deb_themes.sh"
kutanga iwe unofanirwa kutaipa mune iyo terminal iwo unotevera kuraira
Ndatenda zvikuru, ndanga ndisina zano nezve iwo magwaro awakagovana, ini ndaiwanzoita zvese neruoko, kunyangwe zvisiri zvakawanda, sezvo nyasha yemindi ndeyekuti iwe unoisa nekushandisa
Pindura kune nachofaith
chidzidzo chinonakidza uye chinonyanya kubatsira kuita kwakanaka kwemint serena.Ndakashandisa windows kwemakore mazhinji uye rimwe zuva ndakafunga kuyedza linux uye kutanga ne ubuntu kylin distro yakagadzirirwa chinitos yaitaridzika kunge isina kugadzikana kana kusaziva mashandiro Nesisitimu, ini ndakaedza akati wandei mamwe ma distros neumwe neumwe wavo ndakadzidza zvishoma, ini ndaisada mamwe windows uye kwandiri zvaive zvisina kugadzikana kushandisa linux ndaive ndajaira windows zvirongwa asi ndakaenderera kumberi ne linux ndikasvika edza linux mint 17.3 mate ndakaifarira zvakanyanya ndakaishandisa kwenguva yakareba ndakaedza kudzidza kushandisa linux ndaida kumisikidza iyo desktop ye3D ndakaita kurwa asi handina kukwanisa asi izvo hazvina kundimisa kuti ndingade linux uye sezvo ini ndichifarira kugadziriswa kwakanaka uye runako kwandakaisa linux mint serena 18.1 ingano yekufungidzira ... mint idistro inomhanya mushe pane chero muchina kunyangwe mune iwo ane mashoma zviwanikwa ,, .. yakasimbiswa ,, ikozvino ini kwete refu chinja linux sezvo ndanga ndichiziva nezvazvo iniuchipiwa kuti ine zviwanikwa zvakakwana zvechero basa .. linux yebhizinesi kana yekushandisa pachako inzira yakanaka yekushandisa NDINOGARA NAYO ... shamwari ndatenda nekuda kwekudzidzisa nekutenda kuvanhu vakaita sewe vanoshandira chokwadi chiri nyore chekubatsira
Pedro Damian Caldera Sánchez akadaro
Mhoro shamwari, iyi dzidziso yako yakanaka. Ndine dambudziko uye nderekuti ini handikwanise kuvhura maforodha neiyo terminal. Pandakaita cloning neinotevera kuraira: git clone https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git uye ini ndakaedza kuisa uyu murau mune iyo terminal: ./all-in-once-installation_deb_themes.sh yakandiudza kuti dhairekitori raisavapo. Chimwe chinhu kana iko kuumbana kwapera, ndinofanira kutangazve muchina kana kungovhara iyo basa? Ini ndinofanira kuvhura sei iro rekutanga rakaumbwa dhairekita kubva kune iyo terminal.
Pindura Pedro Damián Caldera Sánchez
Yakanakisa dzidziso kunyangwe iine isinganzwisisike chiperengo uye girama.
Ndinokutendai zvikuru zvirokwazvo!
Ini handikwanise kuisa zvidhori zvinondiudza kuti hazvigone kuwana dhairekitori uye ini ndatoita chinhu checd. Ini handikwanise kuisa iyi tambo
Ndiri newbie 🙁
Pindura kuna saul
unofanirwa kuwedzera "./" pakutanga zvingave zvakaita seizvi ./all-in-once-installation_deb_icons.sh
leo juarez akadaro
ok ndakazvigadzirisa nekupinda mukati madhairekitori madhairekitori
Pindura nhasi juarez
Alberto vargas akadaro
Shaya yangu yakadonha pandakaona gwara iri, ndakanyatsodanana neziso rakashama, ndanga ndichishandisa manjaro uye ndakakurumidza kuenda kunotora Linux Mint 18.1 Serena Ndinovimba zvakanaka kuvonga gwara
Pindura kuna Alberto vargas
Basa rakanaka. Makorokoto. Ndiri newbie, asi ndiri kudzidza. Batsira. Ini ndinonamira pano: ~ / Halo $ ./get-aureola-from-github-to-local-drive.sh
bash: ./get-aureole-from-github-to-local-drive.sh: Faira kana dhairekitori haripo
Ini ndinobvisa sei iyo conky?
Mhanya zvinyorwa sezvazvinotaura ipapo, isa iyo Asura conky, asi ndobvisa sei izvo zvese sezvo pasina script yekuburitsa sezvazviri nemusoro nemifananidzo.
sezvo ini ndakaona kuti pane chimwe chinhu chinonzi conky maneja uye kana chikamhanya, chinodarika imwe conky neimwe.
Ini ndichiri kufarira kuziva kuti ungaburitsa sei conkys uye ayo ese akabatanidzwa maforodha. Zvezuva zvarinotora kubvisa
Eduardo R akadaro
Kana ini ndichida kuita izvi asi mu KDE, ndeipi ingave nzira yacho nemagwaro kana uchiumbika? Mumwe munhu angave ane moyo munyoro zvekutsanangura zvakadzama? Ndatenda
Pindura Eduardo R
Humbero E akadaro
Zvakanakisa, ini ndiri newbie asi ipapo tiri kudzidza kuvonga
Pindura Humbero E
Mhoroi, zvese zvakanaka kwazvo, bvunza, zvinyorwa zvemadimikoni uye maekisheni anoshandiswa kune iyo Linux Mint Mate 18.1 vhezheni? Ndakamirira mhinduro yako. ndatenda
Ndiri mudiwa weLinuxmint, asi ndiri kuve nemutyairi weruzha. Ini ndinoiisa uye muchina unonzwika zvakakwana, unoisa mutyairi weanalogog, asi kana ini ndikagadzirisa mapakeji anonyarara uye achindiratidza chete HDMI kurira kwekuburitsa. zvandinoita ?? kadhi iri intel.
Alfonso, pinda muAureola dhairekitori: cd Aureola
uyezve iwe unonyora: ./get-aureola-from-github-to-local-drive-v1.sh
Ivo vakachinja iwo script zvishoma (-v1)
Mhoroi, ndatenda nemupiro, mubvunzo pamusoro pezvinyorwa nemifananidzo zvichashandiswa kune iyo 18.1 KDE vhezheni ??, ndinovimba unokwanisa kundipindura. Ndatenda
Mhoro munhu wese mushure mekushandisa script agara ./
Sergio Vargas akadaro
Kana ndichiita chinyorwa cheerikdubois chinondibvunza zita rezita uye password, mumwe munhu achaziva kuti chii? Ndatenda nerubatsiro rwako.
Pindura Sergio Vargas
Mhoro shamwari, ini ndichiripo, asi ndanga ndatsvaga kuti ndeupi Erik Dubis
SaSergio ndine matambudziko nezita rekushandisa uye password, iwo andinoisa Akiles haashande kwandiri
Mhoroi ndine mubvunzo maScript aya anoshandawo kune linux mint 18.2 xfce
Mhoroi vanhu vese, heino kwave kubatsira kukuru kwandiri, peji rino ndakaita zvese zvamunotaura asi kubva ku git clone https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git Ndicho chinhu chekupedzisira chandaigona kuita zvimwe zvese, akandiudza kuti mudzi dhairekitori hauna kuwanikwa kana chimwe chinhu chakafanana ... Ini ndiri mutsva asi nyowani nyowani kune iyi linux zvakanyanya zvekuti ndakangoisa pasi pemaawa maviri apfuura uye ndakaifarira ... Kwaziso ndakamirira mhinduro
Yangu nyaya isingawanzoitika nekuti ini ndinobva mukushandisa kugovera uko chinonyanya kukosha ndechekudzivirira chero isiri-yemahara software kana mutyairi pazvose, uye, zviri pachena kuti Linux Mint inobata mutemo wakasiyana, ndinonzwa kushamisika ndichishandisa distro senge izvi asi ndizvo zvazvinobata. Iyo interface yakanakisa uye zvirinani zvese zvinoitwa nekukasira iwe paunotangazve mushure mekumisikidza, gadziriso, madhiraivha emicrocode, iyo yakasarudzika Windows ttf. Ini handina kuita nhanho yesoftware inouya neiyo git nekuti ini handisati ndasarudza kuti ndeapi software yandichaisa asi ichave neruoko, ini ndinogona kuita iyo ine madingindira nemifananidzo nekuti mamwe anotonhorera chaizvo. Zvisinei, iko kuchinja kupi kubva kuTrisquel naParabola kuenda kune iyi xD
Mhoroi, ndafunga kuyedza Linux, iyi dzidziso inoshandira vhezheni 18.2 Sonya
Ndiri kuyedza kuiisa, asi pane zvinhu zvandisinganzwisise, sekuda kuisa halo inoti unopinda mufaira kuisa script, handizive kuti ndoipinza sei.
Izvi ndizvo zvagara zvichindikanda kumashure kubva ku linux, yakaoma kwazvo kune ma newbies
Mhoro. Isa Linux mint 18. Ndinoda rubatsiro kubatanidza HP LaserJet Pro M102w printer. Ndatenda
chakanakisa mupiro ndatenda, asi ini ndine mubvunzo, mushure mekunamatira dhairekitori remifananidzo, ndichizvimisikidza mumisoro-icon-pack dhairekita nekuita zvese-in-once-installation_deb_icons.sh zvinondiudza kuti iyo faira kana dhairekitori haripo.
uyezve panguva yekuumbiridza dura uye kuzviisa ini muaureola dhairekitori yekunyongana nekuita. .
Unogona kundibatsira here?
Pindura kune Mutema
Mumba munowanikwa dhairekitori -mapikicha-mapaki, mune inonyora nyora cd / uye unama kero iriko dhairekitori, kwandiri zvingaratidzika seizvi
cd / imba / muponesi / madingindira-ma-pack-pack… ..uye kana ukangosvika iwe unorova iyo terminal: ./all-in-once-installation_deb_themes.sh
zvakafanana nezvidhori ... yeuka kuti usati «zvese ...» unofanira kuisa ./
Wilson ruiz akadaro
Yakanakisa mupiro, asi sei ndisingagadziri maprinta ese padandemutande, chete iwo andinowedzera nemaoko
Pindura kuna Wilson Ruiz
Inowanikwa NetworkManager 1.4.4, inogadziridza yekumisikidza nekukurumidza
Kuedza Clouding.io, chakanakisa chinoburitsa Cloud Servers muSpain